Friendbuy: Usoro Ntuziaka, Ntuziaka Ntuziaka, na Ntugharị Mgbasa Ozi Mgbasa Ozi | Martech Zone
Wednesday, June 27, 2018 Fraịdee, June 29, 2018 Douglas Karr
Otu onye juo m n’abali a banyere kedu usoro ịgba ụgwọ m na-eji. Adị m onye Freshbooks onye ọrụ ihe dị ka afọ iri ma hụ ya n'anya, yabụ achọrọ m ịhụ ma ha nwere ụdị usoro ntụgharị aka ebe m ga-enweta ego di na nwunye ma ọ bụ ọnwa efu ma ọ bụ ihe ọ bụla. O doro anya na, mgbe m banyere n'ime akaụntụ m, ha nwere nnukwu akwụkwọ ntinye akwụkwọ nke nyere m ohere ịkpọ mmadụ ozugbo site na email, zigara ha ozi site na Facebook Messenger, ma ọ bụ kesaa ikpo okwu n'ihu ọha na Facebook:
Nke kachasị mma, site na ijikọ ya niile, Akwụkwọ ọhụrụ nwere ike nyochaa mmemme ahụ wee hụ otu o si arụ ọrụ. Ngwuputa a bit n'ihu, m hụrụ na ha na-tinye n'ọrụ Enyi na Enyi iji mee mmemme ntinye aka ha.
Enyi na Enyi na-enye injin ntụgharị ntụgharị maka ụdị azụmaahịa ọ bụla - e-commerce, saịtị ndenye aha, ndị na-ebipụta akwụkwọ akụkọ, obere azụmaahịa, SaaS, aha ya. Ndị ọchụnta ego nwere ike iji ma wijetị edezi edezi ma ọ bụ API egosipụtara.
Friendbuy bụ ngwaahịa dị ịtụnanya - ọ dị mfe iji ma dịkwa mfe ijikọ. N’ọnwa isii gara aga, anyị mepụtara ntinye ego nke 6% site na ọwa Friendbuy. Ọ bụ a dịghị-brainer. Carlos Herrera, onye isi oche, Petnet
Friendbuy si Ntuziaka Mmemme Software Atụmatụ Gụnyere:
Temkpụrụ ndebiri - Mfe-idezi, ndebiri wijetị ejiri mara mma na-abawanye njikọ ndị ahịa. Inye data data mmekọrịta, ihe eji eme mobile ma na-ebubata akwụkwọ adreesị.
URL nkeonwe (PURLs) - Ndị ahịa gị nwere ike ịkekọrịta ndị enyi na netwọkụ mmekọrịta mmekọrịta kachasị ama, site na email yana njikọ nkeonwe (PURL). Enwere ike izipu ihe site na ozi ozugbo ma ziga ya na blọọgụ.
Automgwọ ọrụ akpaaka - Ziputa ndị na - ezo aka na ntanetị ụgwọ ọrụ ma ọ bụ tụgharịa iwu azụmaahịa gị na API & webhooks anyị. Ihe ikpo okwu anyi nwere ike inye gi ugwo dika ichoro ma obu ulo ahia, ego ma obu iguzosi ike n'ihe.
Nchịkọta oge - sharingkekọrịta oge na ịkọwapụta ozi gbasara ozi na-enye gị usoro arụmọrụ nkeji oge. Lezienụ anya na ule A / B iji hụ ụdị onyinye, idetuo na ịkpọ oku na-eme ka usoro mmemme mmemme gị dịkwuo elu.
Na-agakọ ule A / B - Nnwale A / B na-enyere gị aka melite ịkekọrịta na ntụgharị ntụgharị ntụgharị; ha na-ewere atụmatụ nke onyinye ndị a na-eweta ntinye aka maka ndị na-ekere òkè na ndị enyi ha.
Icheta - ezubere iche na-enye gị ọbụna karịa kpọmkwem akara gị Ozi Ntuziaka mmemme. Gbanwee mkpọsa gị na onyinye gị site na ndị ahịa, SKU ma ọ bụ koodu coupon.
Nke a bụ nnukwu ihe atụ ọzọ maka Mmemme Mmemme peeji nke:
Tags: ntọala alaka ụlọ ọrụCarlos HerreraFacebookntinye akwụkwọ facebookFreshbooksEnyipetetizoo-a-enyiOzi NtuziakaNtuziaka software